September | 2018 | Purna Oli Free songs
रमानापत्र, बरबुझारथपत्र र निवेदनको लागि यो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ⇒ Ramana-Excel-Blank डाउनलोड गरी प्रयोग गर्ने महानुभावहरुले यसमा भएका कमीकमजोरी पनि औँल्याइदिनुहोला । 1,523 total views,3views today
दिल धुने शब्दहरु
September 20, 2018	0 325 Views
नटक्टक्याउ शब्दहरुले ठटाएर त्यसरी शुद्ध सुतीले बुनिएको मुलायम दिल उध्रिनसक्छ । …….. धुलौटे बजारमा खुल्ला छोड्दा पनि उस्तै टहकिलो सफा/स्निग्ध छ अलिकति किनारामा लागेको धुलो रिठ्ठा जस्ता थोरै हल्का शब्दहरुले धोइँदा सिनित्त सफा हुन्छ अलिकति मायाको न्यानोले सुकिसक्छ भिजेको ...
September 20, 2018	0 132 Views
मन काकाकुल छ । लथालिङ्ग छ । शान्त रहन साउती गर्छु र सम्हाल्न खोज्छु घरिघरि । विदाको घण्टीपछि तितरबितर भएका विद्यार्थीहरुलाई लाइनमा लगाउन हम्मेहम्मे परेजस्तै परिरहेको छ । आफ्नै गोडा उचाल्न पनि धौधौ भइरहेको छ । दौडधुप पटक्कै छैन तैपनि ...
September 9, 2018	0 223 Views
मुस्कान छर्नेहरु आफ्नो घाउ जचाउँ, जाउँ म कहाँ ? खोज्दै थिएँ के गरुँ ? देख्नासाथ पसेँ सफेद् महलमा सोच्दै निवेदन् गरुँ देखेँ नाथ, त्रिदेव, ईशहरुको पूकार गर्नेहरु मागेकै वरदान पाइ क्षणमा आकार फेर्नेहरु । कोठा चिन्न कठीन भयो ...
September 4, 2018	0 134 Views
तलको चित्रमा देखाइएअनुसार ८ लिटर जाने भाँडोमा पूरै तेल भरिएको छ । ५ लिटर जाने भाँडो र ३ लिटर जाने भाँडो रित्ता छन् । त्यो बाहेक अरु भाँडा छैनन् । यी तीनैवटा भाँडाको सहायताबाट एकैपटक चार लिटर तेल ग्राहकलाई दिनुपर्ने ...
September 3, 2018	0 179 Views
बेलुकाको ७ बजिसकेको थियो । यो नै आज दाङबाट छुट्ने अन्तिम रात्रीबस थियो । बस छुट्नै लागेको संकेत एकनाशको कानै खाने तीखो प्याँप्याँ हर्नले दिइरहेको थियो । हातमा बोकेको झोलालाई छातिपट्टि भिरेर म हतारहतार गाडीभित्र छिरेँ । गाडी चढ्ने ...
September 3, 2018	0 117 Views
सम्बन्ध मक्किएको जीर्ण पुल तर्न नसकी फँसेको छु अँध्यारो मुछिएको तिम्रो बस्ती बाहिर धकेलेपश्चात् प्रतिरोधहिन आवाजहरु कति छिट्टै ठड्याइसकेछौ पातालचुम्बी अविश्वासका बाक्ला पर्खालहरु ! र बिछ्याइसकेछौ अझै बाक्ला आशंकाका छतहरु आफैलाई लाखौँ बित्ता गहिरो कुवाको पिँधमा पारेर !! फन्को मारेँ ...